कतारमा नाकाबन्दी : एक हप्ता जे भोगियो - विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २९, २०७४ दीपक भेटवाल
दोहा, कतार — गत सोमबार बिहानै सात बजे हातेफोनमा नेपाली समाचार हेरिरहेको बखत जीमेलमा एउटा ईमेल टुप्लुक्क देखापर्यो । खोलि हेर्दा कतारको एउटा बिश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रोफेसरले पठाएका रहेछन् । उनको नाम रे हो । बुढा रे को उमेर हेर्दा डाँडा माथिको घाम जस्तै लाग्छ । तर, निकै जोसिला र फर्तिला छन् । एकाबिहानै बुढाले के लेखि पठाए भनेर इमेल खोलि हेर्दा त झसंग भएँ । कतारलाई छिमेकीहरुले नाकाबन्दी गरिसकेछन् ।
गत सोमबार बिहानै सात बजे हातेफोनमा नेपाली समाचार हेरिरहेको बखत जीमेलमा एउटा ईमेल टुप्लुक्क देखियो । खोलि हेर्दा कतारको एउटा बिश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रोफेसरले पठाएका रहेछन् । उनको नाम रे हो । बुढा रे को उमेर हेर्दा डाँडा माथिको घाम जस्तै लाग्छ । तर, निकै जोसिला र फर्तिला छन् । एकाबिहानै बुढाले के लेखि पठाए भनेर इमेल खोलि हेर्दा त झसंग भएँ । बुढाले एउटा अनआइन समाचारको लिंक पठाएका रहेछन् । समाचारमा एकाबिहानै कतारका छिमेकी राष्टहरु साउदी अरेविया, बहराइन तथा युएइले कतारसंगको कुटनीनिक सम्बन्ध बिच्छेद गरेको घोषणा गरिएको उल्लेख थियो ।
यि देशहरुले कतारमाथि मध्येपूर्वका सशस्त्र समुहहरुलाई आर्थिक सहायता गरेको आरोप लगाएका छन् । साउदी अरवले कतारको एकमात्र सडक नाका पनि बन्द गर्ने घोषणा गरेको रहेछ । ती देशहरुले कतारका नागरिकलाई पनि १४ दिन भित्र आफनो देश छाडन र आफ्ना देशका नागरीकलाई कतारबाट फर्कन आदेश दिइएका रहेछन् । अलजजिरा अनलाईन खोलेर समाचार हेर्न थालें । हेर्दा हेर्दै घटनाक्रम बतासे गतिमा अघि बढन थाल्यो । युएइको इतिहाद एयरले कतार उड्ने सवै उडानहरु रद्द गर्ने घोषणा गर्यो । एकै छिनमा युएइका अरु एयरलाइन्स कम्पनीहरु इमिरेट्स, एयर अरेविया, फलाई दुबईले पनि त्यस्तै घोषणा गर्यो । ।
साउदीसंग सीमा जोडिएको अर्को मुलुक यमनले पनि कतारसंग कुटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेदको घोषणा गर्‍याे। त्यसैगरी ईजिप्ट राजदुतै फिर्ता बोलायो । हेर्दाहेर्दै खाडीको कटनीतिक संकटको समाचार आगोको मुस्लोसरी एकैछिनमा संसारभरी फैलियो । बिश्वका सबै मिडियाहरुले ब्रेकिङ न्युज दिन थाले । नेपाली अनलाईन पत्रिकाहरुले पनि समाचार प्रकाशन थालिसकेका थिए । कतिपय नेपालीहरुले नेपालबाटै फेसबुकको भित्तामा कतारमा नाकाबन्दी लाग्यो खाद्यन्नको जोहो गरेर ज्यान जोगाउ भन्ने गोर्खे सल्लाह दिन भ्याइसकेका थिए ।
नौ बज्यो । हाते घडी हेर्दै काममा जाउ कि नजाउको दोधारमा फसें । उता भारतको कठोर नाकाबन्दी भोगेर भुक्तामान भएको मनले सोचें खानेकुराको अलिअलि जोगाड गर्नै पर्छ कि ? आफना दुई चिचिला केटाकेटीसंगै छन् । तिनले बिहान बेलुका खाने अलमराइ मार्काको दुध साउदी अरेवियाबाट आउँछ । साउदीले नाका बन्द गरिसक्यो । केटाकेटीले के खालान् ? यसो सोचें अरु नभए पनि केही दिनलाई पुग्ने दुधको जोहो गर्नुपर्यो भन्ने लाग्यो । एक दिनको लागि काम हापियो र लागियो रासनपानीको जोहो गर्न ।
दश बजे घर नजिकैको सपिङमल पुग्दा मल सुनसान जस्तै थियो । नाकाबन्दीको त्रासले किनमेल गर्न जाने ग्राहक मलभित्र सायद म मात्रै थिएँ होला । मलभित्रको शितल वातावरणमा नाकाबन्दीको त्रासको मलिन गन्धसमेत थिएन । हामी फटाफट समान किन्नतिर लाग्यौं । मलको लख्ताभित्र सबै समानहरु भरिभराउ थिए । माटो लागेको आलु टिपेर प्लास्टिकको झोलामा हाल्दै गर्दा मनमनै सोचें । भरेसम्ममा यो आलु हारालुछ भएर तख्ता पुरै खाली हुने हो की? झण्डै एक महिनालाई पुग्ने आलु, प्याज, नुन , चामल र दुध किनियो । एक डंगुर समान किनेर पैसा तिर्ने काउण्टरमा पुग्दा क्यासियरमा काम गर्ने एकजना नेपाली चेलीले पुलुक्क मुखमा हेरिन् । उनको हेराई यतिधेरै समान एकै चोटी किन किन्नु परेको ? भन्ने प्रश्न वाचक हेराई थियो । मैले नाकाबन्दीको त्रासले एकैचोटी धेरै समान किनेको भनेर तिनको जिज्ञासा शान्त पार्न जरुरी ठानिन । झण्डै अठार सय रियालको किनमेल गरेर फर्कने बेला पनि मलको वातावरणमा उस्तै शान्त थियो ।
किनमेल गरेको समानको झोला बोकेर कोठा भित्र छिर्दा मन ढुक्क भयो । तर, खाडी राष्ट्रहरुको कुटनीतिक संकट आगोमा घिउ थपे जस्तो झन्झन् रापिलो हुँदै थियो । छिनछिनमा नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरु बिकास भइरहेको थियो । त्यतिबेलासम्म कतारले कुटनीतिक संकटको औपचारीक प्रतिक्रिया दियो । कतारका परराष्ट्र मन्त्रीले सशस्त्र समुहहरुलाई आर्थिक सहायता गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उक्त आरोपहरु निराधार भएको बताए । शक्ति राष्ट्रहरुले पनि आ–आफनो स्वार्थ अनुकुल धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका थिए । साउदीबाट कतार छिर्ने एक मात्र सडक नाका अबुसम्रामा सयौं माल बाहक ट्रकहरु उतै रोकिएको खबरहरु आईरहेको थियो । ईजिप्ट सरकारले आफनो हवाई मार्ग कतारको लागि निषेध गरेको घोषणा गरिसकेको थियो । छिमेकी मुलुकहरुले एक पछि अर्को उत्तेजक निर्णयहरु सार्वजनिक गरिरहेका थिए । कतार सरकार भने कति पनि उत्तेजनामा नआई शालिन र गम्भिर भएर घटनाक्रम नियालिरहेको थियो ।
भोलीपल्ट बिहानै काममा लागियो । कतारको फराकिलो सडकमा सवारी साधनहरु कुदिरहेका थिए । जनजीवन सबै सामान्य देखिन्थ्यो । दिउँसो कतारका पराराष्ट्र मन्त्रीले कतारको अलजजिरा च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिंदै अन्तर्वार्ता दिंदै सम्वाद द्वारा समस्याको हल गर्न सकिने कुरा राखें । शालिन भाषामा कतारलाई एक्याउनु पर्नाको कारण के हो आफुले बुझ्न नसकेको तर्क गरे । अघिल्लो दिन भारि गिरावट आएको कतारको शेयर बजारले अलिकति सास फेर्न थाल्यो । शेयर बजारको सुचक बिस्तारै माथि उठ्न थाल्यो । कतार एयरवेजले साउदी, बहराईन, युएइ तथा ईजिप्ट जाने सारा उडानहरु रद्द गर्यो । उता युएइले कतारको खेलकुद सम्बन्धी अर्को टिभि च्यानललाई पनि प्रतिबन्ध लगायो ।
कतारबाट निर्यात हुने आलमुनियम बोकेको पानी जहाजलाई दुबईको जेबेलाली बन्दरगाह हुँदै जानको लागि रोक लगायो । युएईले पहिलो चोटी कतार समक्ष आफनो अमुर्त माग तेर्स्यायो । उसले भन्यो कतारसंगको सम्बन्धमा पुर्नबिचार गर्नको लागि कतारको सरकारले ठोस प्रतिबद्धतासहितको समाधानको उपाय पेश गर्नु पर्दछ । उता फिलिपिन्सले आफना नागरिकहरुलाई कतारमा काम गर्न जानको लागि प्रतिबन्ध लगायो । युएइ सरकारले कतारप्रति सहानुभूती देखाउन प्रतिबन्ध लगायो । युएइको नागरिक तथा बासिन्दाहरुलाई सहानुभूती देखाएमा जेल सजाय तथा ठुलो रकम जरिवाना तिराउने घोषणा गर्यो । कुबेतका राजाले समस्याको समधान पहिल्याउन साउदी, युएइ तथा कतारको राजासंग भेटे । तर, संकट टरेन । गएको एक हप्तामा हरेक दिन नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरु बिकशित हुँदै गएका छन् । क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुले आ–आफनो स्वार्थ अनुकुलको भुमिका खेलिरहेका छन् । तर, एक हप्ता बितिसक्दा पनि संकट समाधानको कुनै सेतु फेला पर्न सकेको छैन ।
गएको शुत्रबार नाकाबन्दीको प्रभाव हेर्न बिहानै उठेर सबैभन्दा आफुले डंगुर खाद्यन्न किनेको सपिङ मल तिर लागियो । शपिङ भित्र राखिएका तख्ता भरिभराउ छ । खाद्य समाग्रीको अभाव हुने पूर्व संकेत कतै देखिंदैन । सपिङ मल भित्रको माछा बिक्री केन्द्रमा हेरें । छोरीले उत्पात मनपराउने ईजिप्टको तेलपिया माछा आउन छाडेछ । तर, अरु जातका माछाहरु भरिभराउ नै थिए । बच्चाहरुको प्रिय साउदीको अलमराई दुध सकिएछ । अलमराई दुधको ठाउँ टर्कीको सुतास नाम गरेको दुधले लिएछ । दुध राख्ने तख्ताभरी टर्कीको दुध भरिभराउ थियो । घरभरी एक महिनालाई पुग्ने दुध छ तैपनी चाखौ न टर्कीको दुध भनेर एक लिटर दुध किनियो । दुधको उत्पादन मिति ७ जुनको थियो म गएको दिन ९ तारिख बिहान । ७ जुनमा उत्पादन भएको दुध ९ जुन बिहानै शपिङ मलमा हाजिर थियो । धन्य, कतार सरकारको व्यवस्थापन । टर्कीबाट हवाइजहाज चढेर आएको दुधको भाउ पनि साविककै थियो । यो सबै कतार सरकारको चुस्त ब्यबस्थापन तथा जवाफदेहिताबाट मात्र सम्भव भएको थियो । टर्कीको दुध झोलामा हालेर सल्वा रोड नजिकै कतारको एउट प्रमुख तरकारी बजारतिर लागें । तरकारी बजार जानुको तात्पर्य नाकाबन्दीको असर हेर्नु तथा ताजा तरकारी पाए किनेर ल्याउनु थियो। तरकारी बजारको चहल पहल सामन्य नै थियो । किन्ने किनिरहेका थिए बेच्ने बेचिरहेका थिए । तरकारीको भाउ बुझ्न पसल पसल चाहर्दै गएँ । तरकारीको भाउ पनि सामन्य नै थियो । नाकाबन्दीको कालो छाया तरकारी बजारमा कतै पनि देखिंदैन थियो । तरकारीको भाउ सोधें । एक केजी गोलभेंडालाई झण्डै ६ रियाल पर्ने रहेछ । तरकारी बजारलाई एक फन्को मारेपछि पाँच रियालमा २ मुठा साग किनेर घर फर्किए ।
घर पुगेर शानसंग टर्कीको दुध तताए । चार घण्टामा साउदीबाट ट्रकमा चढेर आएको नाथे अलमाराई दुधलाई माथ खुवाउने उद्देश्यले सात घण्टा हावाईजाहाजमा चढेर आएको टर्कीको दुधलाई मिहिन पाराले उमालें । जहान र बच्चाहरुलाई टर्कीको दुध उत्पात मिठो हुन्छ भनेर फुर्ती लगाए । तातेको दुध भाडो भाडोमा हालेर खान बसियो । जब दुध खान थालियो अलमराई दुध खाईरहेको जिब्रोलाई टर्कीको दुधको स्वाद निकै फरक लाग्यो । एउटा स्वाद, एउटा सोच वा एउटा संस्कृतिमा अभ्यस्त भइसकेको जिन्दगीलाई फरक स्वादमा ढाल्न अलिबेर लाग्ने रहेछ । तर, जीवनलाई परिस्थिती अनुसार त ढाल्नै पर्छ । ढिलो होस वा चाँडो ।
कतार सरकारको आफना बासिन्दाहरुप्रतिको जिम्मेवारी बोध अतुलनीय छ । आफना नागरिक तथा सम्पुर्ण बासिन्दाहरुलाई खाद्यान्नको सहज आपुर्ति गर्नु पर्ने सबै उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ भनेर आश्वश्त पारिसकेको छ । टर्की र ईरानबाट सामुन्द्रिक तथा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर नियमित रुपमा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अरु देशबाट नियमित आउने सामानहरु उसैगरी आइरहेको छ । कतारले नाकाबन्दीको कारणले हुनसक्ने खाद्य संकटलाई शुन्यमा झारिदिएको छ ।
झिनोमात्र कृषि उब्जउ हुने कतार सरकारको खाद्यान्न व्यवथापन देखेपछि आफनो मुलुकमा नाकाबन्दी हुँदाको अवस्था सम्झें । नाका बन्दीका बेला घाम पाटी, रुख पाटी , गाइ पाटी लगायत सवै प्रमुख दल सत्तामा बसे । मिलेर पालै पालो शासन गरे । तर, जनताको दुख कम गर्ने कर्म केही गरेनन् । कोहीले साइकल चढ्छौ भने । कोहीले कर्कश टुक्का हाने । तिनले फगत कालो बजारीको प्रवर्धन गरे । कालो बजारीको प्रर्वधनबाट हातलागि भएको अम्दानीले पाटी चलाए । आफना चाकरीबाज कार्यकर्तालाई कमाउ धन्दामा लीन गराए । जनताहरु दुखजिलो गरेर बाँचे । कोही खाएर बाँचे कोही नखाई बाँचे । कतिले काचै खाए कतिले पकाएर खाए । जनताले काट्नुसम्मको कहर काटे । आफै लागेको नाकाबन्दी आफै खुल्यो । देश र जनताको नाममा शपथ खाएका दलहरुले केही गर्नसकेनन् ।
भारतीय नाकाबन्दीले सातो लिएको नेपाली समाजमा कतारको नाकाबन्दीको आवश्यक भन्दा बढी चर्चा भएको छ । कतारमा रहेका नेपाली भोकै पर्छन् कि भन्ने पीर परेको छ । तर, नेपालको मिडियाले अनावश्यक हल्ला चलाएको जस्तो परिस्थिति कतारमा छैन । हल्ला चले जस्तो कतारमा सम्पूर्ण खाद्यन्न साउदी अरव वा युएइबाट आउने पनि होइन । दुध, अण्डा र सागसब्जि जस्ता केही सिमित खाद्यान्न मात्र उताबाट आउने हो । साउदी र युएईले बन्द गरेको खाद्यान्न पानी जाहाज वा हवाई जहाज हुँदै टर्की र इरानबाट निर्वाध आइरहेको छ । बाहिर सुनिने गरेजस्तो कतारमा कुनै पनि खाद्यान्न उत्पदान नहुने पनि होइन । कतार आफैले पनि दुध उत्पादन गर्छ, मासु, अण्डा, तरकारी उत्पादन गर्छ ।
बर्षेनी कतारले आफनो कृषि उत्पादन बढाउँदै लगेको छ । बजार मागको एक हिस्सा कतारमै उत्पादन भएको तरकारी, मासु, दुध, अण्डाले धान्दै आएको छ । नाकाबन्दी पुर्व पनि कतारमा दाल, चामल, मासु, तेल, चिनी जस्ता खाद्यान्नहरु पाकिस्तान, भारत, ब्राजिल, मलेसिया तथा अष्टेलियालगायतका देशहरुबाट आउथ्यो । अहिले पनि उतैबाट आइरहेकै छ । तसर्थ छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दीले सुदुर भविष्यसम्म पनि कतारमा खाद्य संकट देखिने कुनै संकेत देखिदैन । सिरिया वा इराकमा जस्तो युद्ध भडकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि नेपाली समाजमा ब्याप्त छ । तर, नेपाल तिर सोचेको जस्तो खराव परिस्थिति कतारमा छैन । न त खाडीको कुटनीतिक संकट नै तत्काल युद्ध भड्किनसम्म सक्ने स्तरको हो । खाडी क्षेत्रको ठोस राजनीतिक र सामरिक धरातलमा उभिएर हेर्दा पर क्षितिजसम्म कतारमा युद्धको कुनै संकेत देखिंदैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ १८:१६
राजविराजमा राजपाको मसाल जुलुस
जेष्ठ २९, २०७४ अवधेशकुमार झा
राजविराज — संविधान संशोधन बिना स्थानिय तहको निर्वाचन हुन नदिने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका कार्यकर्ताहरुले सोमवार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा मसाल जुलुस प्रर्दशन गरेका छन् ।
स्थानिय शिव मिन्दर अगाडीबाट निस्केको राजपाको मसाल जुलुस राजविराजको बिभिन्न भागको परिक्रमा गर्दे जनआन्दोलन चौकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । मसालजुलुसमा राजपाका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय मृगेन्द्रकुमार सिंह यादब र नवलकिसोर साह, महासचिव मनिषकुमार सुमन, सह महासचिव जयप्रकास ठाकुर, सचिव गजेन्द्र मण्डलसहित जिल्लामा उपलब्ध केन्द्रिय सदस्यहरु समेत सहभागी थिए ।
मसाल जुलुस पछि आयोजित कोणसभाका बक्ताहरुले संविधान संशोधन,जनसंख्याका आधारमा स्थानिय तह पुनर्संरचना लगायतको आफूहरुको माग पुरा नभए स्थानिय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ १८:११